World – Page3– Latest News from around the world, nepal news, breaking news, latest news, US today, Nepal today, India today
By elatestnews.com September 16, 2017 September 16, 2017
३१ भदौ, वासिङ्टन । समुद्री आँधी इर्माका कारण क्यारिबियन समुद्रमा अवस्थित बर्मुडा टापु निर्जन बनेको छ । तीन सय वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक उक्त सुन्दर टापु जीवनका लागि अयोग्य बनेको हो । आँधीको प्रकोपका कारण त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै मानिस अन्यत्र सरेका छन् । ‘टापुका बस्तिहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त बनेका छन्,’ अमेरिकाका लागि बर्मुडा र […]
Food Korea World korea food nepali restaurant in korea
चितवन स्थाई घर भई बैदेशिक रोजगारी को सिलसिला सन 2004 मा कोरिया आएका राजेश बाबु श्रेष्ठ र मकवानपुर को हेटौडा जन्मस्थान भयकी उहॉ कि पत्नी पूनम को यो जोडी कोरिया लाई आफ्नो कर्म थलो बनाउदै रेस्टुरेन्ट व्यवसाय अगाड़ी वनाउदै हुनुहुन्छ! सरल र मिजासीला यी दुई जोडी आफ्ना ग्राहक लाई सन्तुस्टी प्रदान गर्न तल्लीन हुनुहुन्छ! चितवन […]
शनिबार राति युएफसी च्याम्पियन कोनर मेकग्रेगरलाई हराएका अमेरिकी बक्सिङ खेलाडी फ्लोएड मेवेदर आफ्नो जीवनमा १ अर्ब अमेरिकी डलर कमाउने तेस्रो खेलाडी हुने भएका छन्। मेवेदर र मेक ग्रेगरको सो भीडन्तको पे पर भ्यू (पैसा तिरेर हेर्ने) मा लगभग ७० करोड डलरसम्म उठ्न सक्ने अनुमान छ। बक्सिङका ठूला भीडन्तहरू टिभी अथवा इन्टरनेटमा हेर्न हरेक चोटी पैसा […]